मुटु शरीर बाहिर भएकी ५ वर्षकी बालिका !! - Gandak News
मुटु शरीर बाहिर भएकी ५ वर्षकी बालिका !!
गण्डक न्यूज द्वारा ९ श्रावण २०७७, शुक्रबार १९:१८ मा प्रकाशित 0
५ वर्षकी बालिकाको मुटु बाहिर छ र पनि उनी सामान्य दिन बिताइरहेकी छिन् । वेरसाविया नामकी बच्चीको मुटु जन्म देखि नै शरीरको बाहिर निक्लेको हो ।मुटु बाहिर निस्केको देखेर अरुलाई डर लागेपनि उनले भने सहजै हिडीरहेकी हुन्छिन् । रुसबाट आफ्नो नानीको उपचारको लागि बाबुआमा अमेरिका पुगेका छन् ।